Imibuzo evame ukubuzwa - Shenzhen anytec Technology Co., Ltd.
Ingabe imboni noma ukuhweba inkampani?
Singabakhiqizi bewashi elihlakaniphile, futhi sinikeza amakhasimende ethu insizakalo ye-OEM ne-ODM.
Okwezinto ezijwayelekile, i-MOQ yethu izingcezu ezi-5 zamakhasimende ahlola imakethe yawo, nokwenza izinto ngendlela oyifisayo, i-MOQ yethu ngama-1000pcs. (Uma uhlelo lokusebenza ngokwezifiso luyi-10k, sdk 5k).
Ngingathola isampula yamahhala?
Ngesampula yamahhala, singakufakela isicelo futhi ngemuva kokukhokha nokuhlola isampula lethu, uma u-oda imikhiqizo yobuningi, sizobuyisa imali yakho yesampula kusuka ekukhokheni kwe-mass oda.
Siyini isikhathi sakho sokukhokha?
Ngama-oda e-alibaba, ungakhokha ku-alibaba ukuqinisekiswa kwe-inthanethi ku-inthanethi, uma ungaxhunyiwe ku-inthanethi, i-T / T iyamukeleka, idiphozi engu-30% ne-70% esele ngaphambi kokuthunyelwa.
Uma isampula sinesitoko isikhathi sokulethwa siyizinsuku eziyi-1-3, futhi ngama-oda amancane angaphansi kwama-500pcs, izinsuku ezingama-3-7, futhi ama-oda wokukhiqiza ngobuningi ayizinsuku eziyi-15 kuye kwezi-20, kuya ngobuningi be-oda lakho.